VaMnangagwa Vanoti Vanenge Vakundwa Ngavabvume Kukundwa
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa voshanda nekupembera nevanenge vakakunda kuitira kuti munyika muve nerunyararo.
Vachitaura nhasi muBanket apo vanga vachitsvaira marara mumusha unogara veruzhinji weKuwadzana, VaMnangagwa vati vanhu vanofanirwa kuwirirana munyika, uye kuti kana munhu akundwa musarudzo, haafanirwe kuita zvemhirizhonga asi kuti anofanirwa kupembera nevakakunda kuti munyika muve nerunyararo.
VaMnangagwa vati kana munhu akundwa anofanirwa kusiya zvinenge zvamukundisa zvemhirizhonga, uyo anenge akunda sezvavakaita, oramba achiita zvinoita kuti arambe achikunda.
VaMnangagwa vati bato ravo reZanu PF rinokunda nokudaro richaramba richiita zvinokundisa zvekuenda kunonzwa zvichemo zvevanhu nekuzvigadzirisa sezvavakaita zvekuunza mabhazi anobhadharwa mari shoma yekufambisa.
Kunyange VaMnangagwa vasina kudoma bato nezita, vazhinji vanoti ibato rinopikisa reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa ranga richitaurwa.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC, VaLuke Tamborinyoka, vati bato ravo harisi kuzobva pachokwadi chekuti VaMnangagwa vakabirira sarudzo izvo vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakabvuma nekuchinja zvakabuda musarudzo katatu.
Panyaya yehutsanana VaMnangagwa vati hurumende ichaisa mutemo wekuti motokari dzose dzinotakura veruzhinji zvikuru mabhazi dzive nemabhini ekurasira marara sezvo zvakaonekwa kuti vanhu vanenge vari mudzimotokari vanorasa marara nepamahwindo.
Asi mumwe mugari wemuBanket asina kuda kudomwa nezita anoti kuchenesa nzvimbo hakufanirwe kumirira zuva rinotsvaira mutungamiri wenyika sezviri kuitika muBanket umo makatsvairwa nezuro nekuti VaMnangagwa vari kuuya.
VaMnangangwa, avo vasvika muBanket nguva dza 8 manganani dzavanga vachitarisirwa, vaudza vanhu kuti vakurumidza nekuti vari kuenda kuAdis Ababa, KuEthiopia nhasi kumusangano weAfrican Union.